FAMONOANA AN’I MOPERA NICOLAS RATODISOA : Hitory ny Diosezin’Antananarivo
Nitafa tamin’ny mpanao gazety omaly, ny arsevekan’ Antananarivo, Monsenera Razanakolona Odon Marie Arsène sy ny Vikera Jeneraly eto amin’ny diosezin’ Antananarivo, R.P Ludovic Rabenantoandro manoloana ilay raharaha nahafaty an’i Mopera Nicolas Ratodisoa na Mopera Nicolas Soanavela. 18 février 2019
Nisongadina nandritra ity tafa ity fa famonoana niniana natao no nanjo ilay mopera niharan-doza ka tsy maintsy hitory ireo izay navanon-doza tamin’iny raharaha iny ny eo anivon’ny Diosezin’ Antananarivo.
Nanazava ny vikera jeneraly, Ludovic Rabenantoandro, fa tsy maty avy hatrany akory ity mopera nisy namono ity fa mbola nisy fotoana nahafahana niresaka taminy ary nandritra izany no nitantarany ny tranga nahazo azy. Raha araka ny fitantarana hatrany dia voalaza fa nisy nanakana ny môpera Nicolas Ratodisoa. Nandrahona azy ireo jiolahy no sady nanery ity farany hamoaka izay vola rehetra tany aminy tamin’io fotoana io. Namaly tamim-pahatsorana ilay môpera tamin’izay ary nilaza fa tsy manam-bola satria avy namangy marary saingy tsy te hahalala an’izany ireo jiolahy ka nanery azy hidina teo ambonin’ny môtô nentiny. Raha vantany vao tafidina anefa ity môpera ity avy hatrany dia nitifitra ireo jiolahy ary nalain’izy ireo ny sakaosy nentiny.
Na izany aza, nitsotra mazava ny arsevekan’ Antananarivo fa avela manao ny asany an-kalalahana amin’ny fanadihadiana izay ataony ny mpitandro filaminana sy ny tompon’andraikitra manoloana iny raharaha iny. Notsipihiny mazava ihany koa nandritra ity fanambaràna nataony ity fa tsy ny pretra ihany akory no iharan’ny tsy fandriam-pahalemana tahaka izao fa ny olom-pirenena amin’ny ankapobeny mihitsy. Efa nisy, hoy izy ireo teo aloha famonoana mpitandrina miasa any amin’ny faritra ambanivohitra, fakana an-keriny nahazo ny mpitsabo tahaka ilay tranga niseho tany Tsaratanàna vao tsy ela akory izay ary efa re matetika sy niverimberina mihitsy tato ho ato ny vaky trano izay nahafatesana olona betsaka.
Manoloana ireny tsy fandriam-pahalemana ireny indrindra dia nampahatsiahy ny arseveka fa efa nisy ny taratasin’ny fivondronamben’ny eveka tamin’ny 13 mey 2017, nilaza fa tokony handraisan’ny tompon’andraikitra fepetra hentitra ny mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana misesilany eto amin’ny firenena. Anisany voambara tao anatin’io ihany koa ny fiadiana amin’ny kolikoly sy ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Ankoatra ireo dia nanambara ihany koa ny tompon’andraikitry ny « Justice et Paix » eto amin’ny diosezin’ Antananarivo fa mila ezaka sy fiaraha-mientan’ny rehetra ny famongorana tanteraka ireny asa ratsy ireny mba hahafahan’ny mpitandro filaminana manao ny asany ara-dalàna hisian’ny fandriam-pahalemana sy ny tena fihavanana hanentanana ny fiarovana ny aina.